Izindlu zikaVictoria - I-Airbnb
513 okushiwo abanye
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Caitie
U-Caitie Ungumbungazi ovelele
* * Ngenxa ye-COVID 19, sisebenza ngokucophelela ekuhlanzeni nasekuhlanzeni nge-sanitizer ikamelo phakathi nezivakashi. Ikamelo lethu liyimfihlo ngokuphelele futhi linikeza ukuzingenisa.
Siyakwamukela ekhaya lethu elibukekayo elakhiwa ngo-1912. Ikhaya lethu litholakala emgwaqweni othulile, kodwa osendaweni ephakathi eduze nedolobha. Ikamelo/ifulethi lakho litholakala endaweni entsha yekhaya.
Ikamelo lakho litholakala ekufakweni okusha kwekhaya esitezi sokuqala. Iphrayivethi ngokuphelele enendawo yayo yokungena engenazo izikhiye, indlu yangasese enobhavu kanye nendawo engasese ye-patio yangaphandle. Kukhona umnyango owodwa, onokhiye, ohlukanisa ikamelo kuyo yonke indlu. Uzoba nesiqandisi esincane sokuphumula iziphuzo kanye/noma ukudla okuthile. Ukusetshenziswa kwekhishi lethu akufakiwe. Asinikezi isidlo sasekuseni ngalesi sikhathi. Noma kunjalo, kukhona iketela, umshini wekhofi, ubisi/ushukela kanye nokukhethwa kwamatiye atholakalayo ekamelweni.
Siyaziqhenya ngekhaya lethu futhi silwela ukugcina indawo yethu yokuhlala ihlanzekile futhi icocekile. Sigeza amashidi, amathawula nendawo yonke phakathi kwesivakashi ngasinye ukuze siqinisekise ukuthi konke kuhlanzekile futhi kunuka kamnandi. Indlu yethu inomshini wokuqandisa nokushisisa umoya ngezinyanga zasehlobo ezishisayo. Ayikho ithelevishini, kodwa i-Wifi iyatholakala.
Siyalithanda idolobha lethu nakho konke okudingayo, ngakho sifuna ukuhlala kwakho kukhumbuleke futhi kube ntofontofo ngangokunokwenzeka!
4.78 out of 5 stars from 513 reviews
4.78 · 513 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-513
Siyajabula ukunikeza noma yikuphi ukusikisela kwezindawo zokudlela noma imisebenzi yasendaweni/izindawo. Sobabili singabagibeli bamadwala futhi singanikeza ulwazi oluningi ngendawo yokuqwala izintaba zedolobha e-Skaha Bluffs, iPaki Lesifundazwe.
Ezinyangeni zasebusika, indawo yethu iyimizuzu engu-45 uma uhamba ngemoto ukuya e-Apex Mountain resort kanye nesikhungo se-Nickelplate nordic.
UCaitie Ungumbungazi ovelele